एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकीकरण कहाँ अडकियो ? | Sindhuli Saugat
एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकीकरण कहाँ अडकियो ?
सिन्धुली साैगात संवाददाता २०७५ जेठ १ गते मंगलवार काठमाडौं
एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकीकरणको पार्टी एकताको नजिक रहेका दुबै पार्टीभित्र फेरि खटपट सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर माओवादी सशंकित देखिएको आरोप नेताहरूको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकीकरणको सम्वादलाई पातलो बनाएको भनेर कार्यकर्ताको आलोचना खेप्नु परेको छ ।
दुई पार्टीबीच एकतापछि हुने विचार सिद्धान्त, कार्य्दिशा तथा आगामी लक्ष्यसमेतमा सहमति गर्दै हस्ताक्षर गरेका दुई दलबीच पछिल्लो पटक सरकार सञ्चालनमै खटपट देखिएको नेताहरूको भनाइ छ । तर, कार्यकर्ताहरूले निर्वाचनमा गरेको प्रतिवद्धताअनुसार पार्टी एकीकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लाे - दोस्रो नगरसभाबाट विभिन्न विधेयक स्वीकृत
अघिल्लाे - चाँदीका सामान सहित एक जना पक्राउ